Amamodeli wezimbadada zokuhamba ngamadoda - Imfashini Kwabesilisa Abanesitayela | Amadoda aSitayela
Amamodeli wezimbadada zokuhamba zabesilisa
U-Alicia tomero | 22/05/2021 09:57 | Calzado, imfashini
Kuleli hlobo bathatha i- izimbadada zokuhamba amadodaZikulungele ukuhamba izintaba futhi zigqame ngokusebenziseka okuhle kakhulu. Babathanda kakhulu kangangokuthi unyaka ngamunye izicathulo ezinhle kakhulu ziyakhiwa, ngoba ungagqoka izimbadada zakho njengengxenye yezingubo zakho futhi udlale imidlalo i-montaña. Ngalesi sizathu, amadoda amaningi Bakhetha lolu hlobo lwezicathulo ukunethezeka nokuphefumula. Zilula kangako ukuthi zilungele yonke into, ngisho nokuhamba nojosaka, noma ukukhululeka ezinsukwini zansuku zonke zasehlobo.
Kubathandi bezemidlalo kukhona amamodeli aphephe kakhulu futhi anethezekile ukuwasebenzisa. Zingasuswa zifakwe kalula, zinokusekelwa okuhle onyaweni futhi uma ufuna ungamanzisa izinyawo zakho ngazo, ezizoma esikhathini semizuzu.
1 Izimbadada ezihamba phambili kakhulu
1.1 Izimbadada ezikhanyayo zokuhamba
1.2 Izimbadada zokuhamba ezimelana namanzi
1.3 Izimbadada ezinhle zokuhamba
Izimbadada ezihamba phambili kakhulu
Ukuze uqhamuke nokuqhathanisa kwakho okuhle, kufanele ucabangele yonke imininingwane oyidingayo esimbadada bese ubona ukuthi ihambisana nenhloso yakho. Kukhona izimbadada eziphakelayo ukuhamba ngokungapheli ezindleleni noma emikhondweni, weqa imifula noma ngekithi elula ukwazi ukuhamba uzungeze idolobha.
Okufanele sikunake ngokuhamba kahle I-ergonomic futhi ivumelana kahle ne-physiognomy yonyawo lwakho, lokho kwenziwa ukuthi kwenzeke okwemvelo, okuhlala isikhathi eside futhi okuphefumulayo ukugwema ukuklwebheka okungenzeka. Kubalulekile ukuthi futhi ibe nayo ematheni amelana kakhulu nokuthi izinto zayo azivimbi manzi.
Izibuko zelanga zentaba
Kunemiklamo eminingi namamodeli angalingana nenhloso ofuna ukuyinikeza izimbadada ezithile zokuhamba. Iqiniso ukuthi kungaba nzima ukuthatha isinqumo bese ekugcineni ugcina wamukela imodeli yokwakheka kwayo, kepha siphakamisa uhlu lwakho ukuze uqhathanise amamodeli amahle kakhulu ongakwazi ukuwafanela.
Izimbadada ezikhanyayo zokuhamba
Ziyakwazi ukhululekile futhi enza izinto ezihlukahlukene. Ilungele ukungawakhubekisi njengoba ekhululeke kakhulu, enezinto ezisonga kancane ngakho-ke zikhululekile kakhulu. Lezi zimbadada zingasetshenziselwa ukunyuka okuncane, okwenziwe ngezinto zokwenziwa nangokuvalwa kwe-hook and loop.
Izinhlobo esizibeke ezithombeni ziyi- I-TevaTerra nge-sole sole, ngesithende esicaba nezinto zokwenziwa. Siphinde sakhetha ezinye Izimbadada zomkhiqizo we-Asifn, ngekhophi elingakahleleki, ulwelwesi lwenjoloba kanye nolwelwesi lwesikhumba. Izinhlobo ezilandelayo Ikamela Umqhele iqiniswe ematheni abo ukuvimbela ukushelela, okwenziwe ngozwane oyindilinga futhi oqinisiwe, nangamatende wenjoloba. Izimbadada ezibomvu kukhona UJorich, enemodeli engajwayelekile futhi enesibindi, ephefumula kakhulu futhi ekahle ukugqoka olwandle.
Izimbadada zokuhamba ezimelana namanzi
Siyazithanda lezi zimbadada ngoba zimboza zonke izesekeli ukwenza isicathulo esifanele intaba. Ilungele ukuhamba izintaba nokunyathela emanzini okuthandwa ngabantu abaningi abahamba izintaba. Zenziwe ngezinto zokwakha ukukhululeka okukhulu kokomisa futhi njalo nedizayini ekulula ukuyilungisa. Awukwazi ukuphuthelwa ukwakheka kwayo kwezinto ezintofontofo ohambweni olude.
Izimbadada zikaKeen ze-Clearwater CNX Zenzelwe abalandeli bezintaba nezinsuku ezifudumele, ezifakwe izinto ezingamelana nazo, kepha zemizila elula kanye nokuziphilisa okuhhafu wezinsuku. Imodeli yeGrition Ziyizimbadada ezinomunwe ovaliwe no-ergonomic. Zilungele izintaba futhi ziyise olwandle, zakhiwe ngendlela engajwayelekile futhi zinezintambo zokulungisa kangcono kakhulu kububanzi benyawo.
Izimbadada zokuqala zokuhamba ziguquguquka kakhulu futhi zinozwane oluvaliwe, ilungele ukushaywa futhi ulinge ukuwasebenzisa ezindaweni ezinamanzi. Imodeli elandelayo ngesinye isibonelo se- Abazimisele, Kwenziwe ngokulunga kwemvelo konyawo, ngezinto eziningi ezikhethekile nangama-laces okunwebeka okuvalwa nokusekelwa okukhulu. Ukuphela kwayo kuyashintsha futhi kuyasiza ukuxhumana kangcono nomhlabathi, ngaphandle kokulimaza ukwakheka konyawo.
Izimbadada ezinhle zokuhamba
Lezi zicathulo zinezici ezikhethekile zokuklama okungaqondakali, ngaphandle kokudlala ngokuphelele futhi nokuthinta okungajwayelekile. Kungokwesicathulo ukugqoka nganoma yini, okwezemidlalo nengubo. Ngobuhle ingeyokuqala, ivuswe ngamakhondomu ehlobisa izinhlangothi zayo futhi ngaphezu kwakho konke okwenziwe ngezinto ezingazweli kakhulu ukuze iqhubeke ibe yikhanga lezinhlelo ezinhle kakhulu zangaphandle.
Imodeli yeZerimar Yenzelwe ngekhwalithi ye-premium, ukumbozwa kwesikhumba okuphefumulayo. Ngezinto ezinamathela kakhulu futhi ezingashelelezi, ezinokwesekwa okuphezulu onyaweni nokunyathela kuwo wonke amabala. Izimbadada ezilandelayo Bayisibonelo esihle kakhulu, esinokunwebeka okuphezulu kwesikhumba enemigodi kuzo zonke izinhlangothi zesicathulo ukugcina unyawo lome futhi amagciwane engenawo. Amelana nokuhamba okude futhi akwazi ukuwamanzisa.
Izimbadada zeTggold Banikezwa le modeli ekhethekile, ngezinto ezinokumelana nesikhumba se-premium, kuphela iraba elinokuguquguquka okukhulu nokusekelwa okuhle futhi ngaphandle kwezintambo. Imodeli elandelayo yile UGilkuo Ilungele ukuhamba izintaba, ngesembozo esikhulu sesikhumba futhi senziwe ngokulingana okuphelele ukunqoba noma isiphi isithiyo.
Uma kuziwa ekukhetheni okuhle kakhulu, sesivele sazi ukuthi kufanele sibala ukuthi sizobasebenzisela ini. Kufanele babambelele ngokuphelele, ngotende oluboshwe kakhulu. Idizayini nayo ibalulekile, kepha kufanele yenziwe ngezinto eziqinile, eziphefumulayo nezingasindi, kanye nohlelo lokuvikela ukumelana nonyawo. Induduzo nokunyakaza kwamahhala sikala ngesicathulo esihle sokuhamba.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Amamodeli wezimbadada zokuhamba zabesilisa
Zonke lezi zinhlobo zezingubo lapha eBtà, uzithathaphi. ??
U-Alicia tomero kusho
Zama kuGoogle uhlobo lwezimbadada ozothola ukuthi ungazithenga kuphi. Sikufisela inhlanhla kanye nokuzithoba.
Phendula u-Alicia Tomero
Izeluleko ezinhle kakhulu zamadoda anezinqe ezibanzi
Ziqeqeshe ngamadoda ashaya indlwabu ukuze uthuthukise ubulili bakho